LINUX ကိုမှ VISUAL STUDIO INSTALLING - LINUX ကို - 2019
Linux ထဲရှိ Visual Studio က Code ကိုထည့်သွင်းခြင်း
မဆိုလူမှုရေးကွန်ယက်နှင့် VC ကိုအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသော repository ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာများ, သောင်းချီဓာတ်ပုံများသန်းပေါင်းများစွာ၏, ဗီဒီယိုများ, အသိုင်းအဝိုင်း, လူထု, မှတ်တမ်းများနှင့် repost နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိသုံးစွဲသူ VKontakte သန်းပေါင်းများစွာ။ တောင်မှအတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူကအလွယ်တကူစီမံကိန်း၏ကျယ်ပြန့်တွင် "ပျောက်ဆုံးသွားရ" နိုငျသညျ။ VKontakte ကိုကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လိုမှန်ကန်စွာ?
ကျနော်တို့ VKontakte မှာရှာကြသည်
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ချဉ်းကပ်သုံးပြီးတစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူ VKontakte သယံဇာတများ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီကရရှိနိုင်ကြောင်းကိုမဆိုသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ လူမှုကွန်ယက်ကို developer များကြင်နာစွာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီ feature ၏စောင့်ရှောက်မှုခံယူလေ၏။ အတူတူကို site ၏အပြည့်အဝဗားရှင်းနှင့် based Android နှင့် iOS အတွက်မိုဘိုင်း apps များအတွက်တစ်ခုခုရှာအံ့သောငှါဖို့ကြိုးစားကြကုန်အံ့။
သင်တို့သည်လည်း VKontakte အောက်ကလင့်ခ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်တင်ခဲ့သည်ရှာဖွေတာပေါ်ရှိအခြားအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ရက်စွဲကို VKontakte ရေးသားချက်များကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေ VKontakte ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
စကားပြော VKontakte ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
မှတ်စု VKontakte ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါ site ၏အပြည့်အဝဗားရှင်းရှာရန်
အဆက်မပြတ်စီမံကိန်းအသုံးပြုသူအဆင်ပြေဘို့တိုးတက်လျက်ရှိသောဆိုက်ကို VKontakte ကွဲပြားခြားနားသောထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကို။ ရှာရန်အမျိုးအစားနှင့်အရင်းအမြစ်များအားဖြင့် setting များနှင့် filter တွေနဲ့တစ်ခုလုံးစနစ်ဖြစ်သည်။ ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်လေးနက်သောအခက်အခဲများရှိသင့်ပါသည်။
မည်သည့် web browser ကိုခုနှစ်တွင်ဆိုက် VKontakte ဖွင့်လှစ်ခြင်း, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာများကို VC ကိုသကျသခေံလိုင်းရဲ့ထိပ်မှာ "ရှာရန်"။ ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသဘောဆောငျကြောင်းစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တို print ထုတ်။ တွန်းအားပေး button ကို ဝင်ရောက်.
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဒေါင်းလုပ်လုပ်နှငျ့သငျတောငျးဆိုခကျြဝငျကွအထွေထွေရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအပေါ်ကြည့်ရှုဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျအသေးစိတ်အတွက်သူတို့ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေဘို့, သငျသညျညာဘက်ဖြစ်သော, အအမျိုးအစားများကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အပိုင်းအတွက်ရွှေ့ဖို့ "လူတွေက" လိုချင်သောအသုံးပြုသူအကောင့်ကိုရှာဖွေရန်။
စာမျက်နှာပေါ်တွင် "လူတွေက" သင်သည်မည်သည့်အသုံးပြုသူ VKontakte ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေရေးကျဉ်းမြောင်းစေရန်, လက်ျာကော်လံစုစည်းစီစဉ်အဖြစ်ဒေသတွင်း, ကျောင်း, ကောလိပ်, အသက်, လိင်, ယောက်ျား၏အလုပ်နှင့်ဘဝ၏အရပျ၌ထားလေ၏။
မည်သည့်စံချိန်ကိုရှာဖွေရန်, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုသွား "သတင်း"။ ရှာဖွေရေး setting ကိုခုနှစ်တွင် geolocation သနျ့, မက်ဆေ့ခ်ျကို, ပူးတွဲမှုအမျိုးအစားကိုကိုးကားလင့်များနဲ့ content အမျိုးအစားကိုဖော်ပြသည်။
အုပ်စုများသို့မဟုတ် PUBLIC လိုအပ်ချက်ကိုရှာဖွေကော်လံကို click ရန် "လူထု"။ ထားသော filters အဖြစ်သင်ဘာသာရပ်နှင့်ရပ်ရွာအမျိုးအစား, ဒေသထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။
အပိုင်း "ခံ" ဒါဟာသင်တစ်ဦးသီချင်း, ဂီတသို့မဟုတ်အခြားအသံ file ကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ သင်ကသင့်လျော်တဲ့ box ကိုစစ်ဆေးနေအသုံးပြုပုံအနုပညာရှင်နာမတော်အားဖြင့်သာရှာဖွေရေးပါဝင်နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှာဖွေရေး VKontakte ၏နောက်ဆုံးကော်လံ - ဖြစ်ပါသည် "ဗီဒီယိုများ"။ သူတို့ကဆက်စပ်မှု, ကြာချိန်, ရက်စွဲကဆက်ပြောသည်နှင့်အရည်အသွေးအားဖြင့်ခွဲထားခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပေးသော tools တွေကိုသုံးပြီးသင်အလွယ်တကူ, အလိုရှိသောအုပ်စု, သီချင်း, သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတစ်ဦးဆုံးရှုံးခဲ့မိတျဆှေ VKontakte ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
မိုဘိုင်း apps များအတွက်ရှာရန်
လိုအပ်သောဒေတာများကိုနိုင်ပါတယ်ရှာနဲ့ Android နှင့် iOS ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်မိုဘိုင်း application များရန်။ သဘာဝကျကျ, အင်တာဖေ့အပြည့်အဝဗားရှင်း VKontakte site မှအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါပေမယ့်လည်းမဆို user အတွက်ရိုးရှင်းပြီးနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန် application ကို VC ကိုအပေါ်ကို run ။ ကျနော်တို့ username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အဆိုပါခွင့်ပြုချက်ဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ရမည်။ သင့်အကောင့် Login ။
အောက်ပိုင်း toolbar ကိုတွင်, မှန်ဘီလူးတွေနဲ့အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ရှာရန်အပိုင်းကိုသွားပါ။
ရှာဖွေရေး box ကိုလယ်ပြင်၌ သာ. အပြည့်အဝနှင့်တိကျစွာတောင်းဆိုထားသောအချက်အလက်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနဲ့ content သိရှိစေရန်ဖို့ကြိုးစားနေ, သင့်တောင်းဆိုမှုကိုရေးဆွဲ။
ကြည့်ရန်အကျဉ်းချုပ်ရလဒ်များကို။ သတင်းအချက်အလက်များအဘို့ပိုပြီးအသေးစိတ်ရှာဖွေရေးဘို့သင့်ကိုအထူးယူနစ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ tab ကိုများအတွက်ပထမဦးစွာအသုံးပြုသူကြည့် "လူတွေက".
တောင်းဆိုချက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းရန်ရှာဖွေရေး box ထဲမှာအိုင်ကွန်အပေါ် Tapan စစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။
တိုင်းပြည်, မြို့, ကျား, မ, အသက်နှင့်အသုံးပြုသူရှာသောအခါအိမ်ထောင်ရေး status ကိုသတ်မှတ်မည်။ ခလုတ်ကိုတွန်း "Show ရလဒ်များ".
တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနေရာချထားဖို့, သင်အပိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ် "လူထု" နဲ့ settings တွေကိုရှာဖွေခလုတ်ကိုထိပုတ်ပါ။
ဆီလျော်မှု, ရက်စွဲ, သင်တန်းသားများကိုအရေအတွက်, အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်တည်နေရာအမျိုးအစားအားဖြင့်ချိန်ညှိ filter များ။ အဆိုပါ tab ကိုအတူတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့် "လူတွေက" ရလဒ်ဖော်ပြရန်ခလုတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
နောက်တစ်နေ့အပိုင်း - "ဂီတ"။ ဤတွင်ရှာဖွေရေးသုံးကဏ္ဍများသို့ကွဲပြား: "ဂီတပညာရှင်များ", "အယ်လ်ဘန်", "သီချင်းများ"။ ဒဏ်ငွေ tuning, ကံမကောင်း, ထောက်ပံ့မပေးပါ။
နောက်ဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုသတင်းများ, စာတိုက်, repost နှင့်အခြားမှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျမိုဘိုင်း application များအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, သင် VC ကိုလည်းအောင်မြင်စွာသင်ကစိတ်ဝင်စားတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများနှင့် filter အသုံးပြုခြင်း, သင်အသက်တာ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်ပိတ်ထားတဲ့ မှလွဲ. နီးပါးသင်လိုအပ်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ရှာရန် Group မှ VKontakte